Guddiyada Dastuurka ee Baarlamaanka oo Qaaddacay Shirka Dib-u-eegista Dastuurka ee Berri – Radio Daljir
Guddiyada Dastuurka ee Baarlamaanka oo Qaaddacay Shirka Dib-u-eegista Dastuurka ee Berri
Oktoobar 7, 2017 2:29 g 0
Guddiyada dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaadacay ka qaybgalka shirwaynaha qaran ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo ay dowladda Soomaaliya ay beri ay ku qabanayso magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha guddiga dastuurka aqalka sare Jen.Cabdiqaybdiid oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay shirkaasi inaan laga soo talo gelin guddigooda, waxaana uu kutilmaamay mid ku kooban oo ay wadato wasaaradda dastuurka.
Shirkan ayaa lagu soo beegay xilli maalinta berito uu ka furmayo magaalada Kismaayo shir ay leeyihiin dowlad goboleedyada Soomaaliya oo looga hadlayo awoodaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, shirkan ayaan wax lug ah aysan ku lahayn dowladda dhexe.
Dhanka kalle warar soo baxaya ayaa sheegaya inay dowlad goboleedyada ay qaadaceen ka qaybgalka shirka beri ee magaalada Muqdisho ee looga hadlayo datsuurka Soomaaliya.
Dowladda faderaalka ee Soomaaliya dowlad goboleedyada ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey hareeyey khilaafaad xoogan taasi oo soo bilaabatay kadib markii maamul goboleedyada ay qaadaceen go’aankii dowladda dhexe ka qaadatay khilaafka dalalka Khaliijka.
Madaxweynaha Puntland oo Agaasime Cusub u Magacaabay Hay’adda Waddooyinka
Taliyihii Ciidanka Booliska Puntland oo Shaqadiisi Dib loogu Celiyeey (Akhri)